Hevitra mandalo ; Resaky ny mpitsimpona akotry : Firaisan-kina mifono fiandrasana kendry tohina | NewsMada
Hevitra mandalo ; Resaky ny mpitsimpona akotry : Firaisan-kina mifono fiandrasana kendry tohina
Olona mifankahala loatra ny mpikambana ao anatin’ ity governemanta vaovao ity ka raha tsy hoe tena faran’ izay olona maloto saina sy fanahy dia sarotra no hieverana azy ireo ho afaka hiray tsikombakomba. Iza anefa moa no mahafantatra? Ny fitiavan-tena sy ny fahazarana manimbika ahazoana tombotsoa manokana mety hitarika fandeferana hampanginana ny fankahalana raha izay no manakana ny fihinanana.
Arakaraky ny mpijery moa ny filazana fa itsy na iroa no nandresy teo amin’ny ady varotra mikasika ny fitsinjaran-toerana ao anatin’ity governemanta ity. Nefa rehefa ampitahaina ny fahefan’ny tompon’andraikitra roa tampony ao amin’ny fitondrana dia azo lazaina fa mifandanja ny hery. Tsy latsa-danja amin’ny fahefan’ny Filoha izay nanimbinana ny fahefan’ny Praiministra Ntsay izay tsy afaka alan-dRajaonarimampianina avy eo amin’ny toerana misy azy. Tsy mahay manetri-tena fa mbola mipetsampentsana ihany moa Ingahy Filoha ao anatin’ilay « Rendez-vous du Président » ka sahy manambara fa ny fanomanana ny fifidianana no tanjona. Mazava ho azy anefa rehefa milaza an’izay izy dia ny fikarakarany ny fiomanany ho voafidy no ezaka ataony.
Ahoana tokoa moa izao ny fomba fifandraisan’ny minisitra eo am-panatanterahany ny adidiny ao anatin’ity governemanta ity ? Toy ny ao anatin’ny fiaraha-monina rehetra dia azo heverina fa tsy maintsy apetraka ny fitsipika anatiny na andeha atao hoe fitsipi-dalao. Ny hany azo hifaneken’ny tsitokotoko samihafa angamba dia ny fifandrarana ny fanaovana lava-maso amin’ny fitsikolovana ny ataon’ny sasany. Samy mikononkonona ny ao ambiliany. Zava-dehibe izay rehefa tsy handany andro amin’ny fitadiavana tetika hifamingapingana. Izany anefa tsy antoka ho an’ny fanatanterahana ny raharaha arak’izay tokony ho izy. Olona antoko daholo ny ao amin’io governemanta io. Samy manana adidy sy fitongilanana ho an’ny azy ny minisitra tsirairay, tsy ilaozan’izay fotoana mety anafangarony tsy nahy ny andraikitra amin’ny maha minisitra azy sy ny adidy noho ny maha mpitolona azy ao amin’ny antoko.
Raha dinihina araky ny rariny sy ny lalàna anefa dia izay fampifangarona izay no fady ary fanaovana ota goavana ny fandingana an’io fady io. Ny lalàna anefa mametraka mazava ny fandrarana fampiasana ny fahefana sy ny fitaovam-panjakana amin’ny fanatanterahana adidy ho an’ny antoko. Sarotra ny hino fa samy hahafehy tena momba izany avokoa ireo tompom-pahefana ambony. Ohatra fotsiny rehefa manao fampielezan-kevitra ny mpilatsaka ao amin’ny antoko misy azy dia iza amin’izy ireo no ahavatra tsy hirongatra sy tsy hirongo fitaovan’ny minisitera feheziny hanampy tosika ny kandidany? Very anjara ireo mpilatsaka hafa tsy manana minisitra mpanohana.